၂ဝ၂ဝ အတွက် ပါတီ၊ လွှတ်တော်၊ အစိုးရ သုံးပွင့်ဆိုင် ညီညွတ်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်း NLD (ဗဟို) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ပြောကြား - Yangon Media Group
၂ဝ၂ဝ အတွက် ပါတီ၊ လွှတ်တော်၊ အစိုးရ သုံးပွင့်ဆိုင် ညီညွတ်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်း NLD (ဗဟို) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ပြောကြား
၂ဝ၂ဝ အတွက် ပါတီ၊ လွှတ် တော်နှင့် အစိုးရ သုံးပွင့်ဆိုင် ညီညွတ်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော် မြင့်မောင်က ပြောသည်။
”ပါတီ၊ လွှတ်တော်၊ အစိုးရ သုံးပွင့်ဆိုင်ညီညွတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ ပါတီဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ပါတီကို တောင့်တင်းခိုင်မာအောင် လုပ်ရမယ်။ ညီညွတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ပါတီကနေ တာဝန်ပေးမှ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်ဖြစ်ကြတာ။ ပါတီထဲမှာနေခဲ့တဲ့ သူတွေရှိတယ်။ အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ- မန္တလေးတိုင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ထွဋ်ဦးဆိုရင် ၁၉၉ဝ တုန်းက ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ၂ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁၅ မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဝင်ဘူး။ ပါတီမှာပဲနေခဲ့တယ်။ ပါတီကို သူ တာဝန်ယူထိန်းကျောင်းတယ်”ဟု ဒုဥက္ကဋ္ဌ (၂) ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေ ဖြင့် ၁၉၉ဝ၊ ၂ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် လွှတ် တော်အဆင့်ဆင့် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံခဲ့ရာ သုံးကြိမ်စလုံး အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်က လက်မဲကြီးကို ဖမ်းပေးပါ
သရေခေတ္တရာပျူမြို့ဟောင်း ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ပြီးနောက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွား ခြောက်ဆမှ ရှစ်ဆအထိ ပိုမိုဝင်ရောက်
လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင်လေးဦးကို အခမဲ့ယာဉ်စီးခွင့် ၊ ဆေးကုသခွင့် မန်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မ?
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဖရဲနှင့် သခွားမွှေး တင်ပို့သောတောင်သူများ နယ်စပ်ဂိတ်တွင် အဆင်ပြေရေးကူညီန?
သမီး မိန်းကလေး မွေးဖွားမည့် ကိတ်ဟတ်ဆန်
တရုတ်နှင့် ဂျပန် မယားအဖြစ် ရောင်းစားမှုများ မြင့်တက်နေသဖြင့် အထူးသတိပြုရန် လူကုန်တားရဲတပ်ဖ